TTSweet: ထွက်တော်မူ နန်းကခွါတယ် ...
မိုးခါး April 16, 2011 at 10:58 AM
ကလေးတွေ စာဖတ်ရတာ စိတ်တောင် မကောင်းဘူး ..
အစစ အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဆုတောင်းပေးပါတယ်အစ်မရေ ..
စော(အဝါရောင်မြေ) April 16, 2011 at 11:13 AM
အမရေ ကောင်းသော ခရီးဖြစ်ပါစေ။
လူကြီးတွေက စာမရေးကြတော့ဘူး ဒီမှာက ဖုန်းလေးတစ်ချက် ဆက်လိုက်ရုံပဲလေ။
မင်္ဂလာ နှစ်သစ်နှင့် အတူ အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။
Vista April 16, 2011 at 11:35 AM
တီဆွိဟိုရောက်ရင်လည်း ရေးပါအုံးနော် .. မျှော်နေမယ်။
I llbmissing u & ur mom
Anonymous April 16, 2011 at 12:15 PM
အမရေ.. Jurong Pointမှာ Barbie ပွဲတော်မှာ ဂျူဂျူကို တွေ့ လို့ အမကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားတာ..မတွေ့ လိုက်ရပါ. အားလုံးအဆင်ပြေပါစေ။ ခင်မင်စွာဖြင့်.... မာလာ (ပန်းမာလာ)
ဖိုးတုတ် April 16, 2011 at 2:02 PM
ဒီမှာက သိတဲ့အတိုင်းပဲ ၊ ကလေးတွေက ကျောင်း ၊ ကျူရှင် အိမ်စာတွေနဲ.ပိနေတော့ အိမ်မှာပဲ ဂိမ်းကစား တီဗွိကြည့်နဲ. သူတို.ဘ၀ကိုဒီလိုပဲဖြတ်သန်းလာရတာ ၊ တစ်ခါတလေ မိဘတွေဆုံမှ ကလေးအချင်းချင်း ကစားဖြစ်ကြတာ ၊ မိသားစုတွေလည်း ဆုံဖို.နေနေသာသာ အလုပ်များလို. ဖုံးတောင်မဆက်ဖြစ်ဖူး ၊
ဂျုဂျူတစ်ယောက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ.ခွဲရမယ်ဆိုတော့ စိတ် မကောင်းပါ၊ အပြုသဘောဘက်က တွေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဂျူဂျူရဲ့ သြဇီက ပညာရေးက စလုံးလောက် stressful ဖြစ်မယ်မထင်ဖူး၊
သြဇီမှာ ဘေးရန်ကင်းသိမ်းကင်းဝေးပြီး အစစအရာအရာ အဆင်ပြေပါစေ ..
သက်ဝေ April 16, 2011 at 3:29 PM
အင်း.. ကလေးတွေရေးတဲ့စာတွေ ဖတ်ရတာ ချစ်စရာ ဝမ်းနည်းစရာလေးတွေ...။
နေရာသစ်မှာ အမြန်ဆုံး အခြေကျ ပျော်မွေ့နိုင်ပါစေ သူငယ်ချင်းရေ... လူချင်းဝေးသွားသော်လည်း အွန်လိုင်းမှာ ဖဘမှာ ဘလော့ဂ်မှာ အမြဲဆုံကြမယ်လေ... ထွေထွေထူးထူးတော့ မှာစရာမရှိ... ဘလော့ဂ်မှာ စာမှန်မှန်ရေးပါလို့ပဲ မှာလိုက်ပါရစေ...း))
P.S. ဂျူးဂျူး သူငယ်ချင်းလေးတွေလို စာမရေးဖြစ်ပေမယ့် မနေ့ညက sms မှာ အသည်းအကြီးကြီးတွေ ပို့ထားတယ်လေ... ခွိခွိ...း))
Iora April 16, 2011 at 3:34 PM
Haveanice move!!
I usually visit your blog and hope you will be sharing more from there.
Anonymous April 16, 2011 at 4:34 PM
နေရာသစ်မှာ အမြန်ဆုံး အသားကျပြီး ပျော်ရွှင်ပါစေ.. တီဆွိနဲ့ ဂျူးဂျူးလေး..
subuueain April 16, 2011 at 4:39 PM
အစစ အဆင်ပြေပါစေနော် တီဆွိ
ချစ်ကြည်အေး April 16, 2011 at 8:15 PM
ဆွိရေ....ဒီနေ့ တို့ အလုပ်များနေတာနဲ့ ဖုန်းတောင် မဆက်ဖြစ်ဘူး၊ အစစ အရာရာအားလုံး အဆင်ပြေပါစေ သူငယ်ချင်းရေ.... ဂျူဂျူလေးလည်း ဟိုကျရင် သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ တွေ့ပြီး ပျော်သွားမှာပါ....။ အွန်လိုင်းမှာ အဆက်အသွယ် မပြတ်နဲ့ပေါ့ သူငယ်ချင်း...All the best...နော်:))
Mon Petit Avatar April 16, 2011 at 9:14 PM
Haveasafe trip and simply wish all the best things for everyone in your family, Ma Ma Sweet!
Baby taster April 16, 2011 at 10:47 PM
ကလေးတွေ စာဖတ်ပြီး ၀မ်းနည်းလိုက်တာ
ခုလာဖတ်တာ ဒုတိယအကြိမ် အတွေ့ အကြုံလေးတွေ
မင်္ဂလာနှစ်သစ်ကို နေရာသစ်မှာ ပျော်ရွှင်အဆင်ပြေစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ
ကိုဇော် April 16, 2011 at 11:29 PM
အစ်မရေးပြတာက ပိုလွမ်းစရာ ကောင်းနေတာဗျာ။
ကျနော်လည်း အခင်ဆုံး သူငယ်ချင်း ဆိုတာတွေနဲ့ ခဏခဏ ခွဲရတာပါပဲဗျာ။ ကြာလာတော့လည်း လူက ထုံလာသလိုပါပဲ။
sonata-cantata April 17, 2011 at 12:45 AM
တီဆွိဆီက ပန်းတွေယူသွားပြီး ပန်းကဗျာဆိုတဲ့ slide show လုပ်ပြီးဘလော့ဂ်မှာတင်ကတည်းက တီဆွိတို့ကို နှုတ်ဆက်တာပါ...။
နှုတ်ဆက်တဲ့ စကားတွေ နှုတ်မထွက်ရဲသူ...ဒီက..တီဆွိထက် အသက်သာကြီးတယ်၊ အသည်းက ဂျူဂျူ သူငယ်ချင်းတွေထက် ငယ်တယ်။
အစစအရာရာ ချောမွေ့ အဆင်ပြေပါစေ
Anonymous April 17, 2011 at 12:45 AM
All the best for you and your family. hope you can still write and post in your blog.
တန်ခူး April 17, 2011 at 2:44 AM
ချစ်သူငယ်ချင်း... မုန့် တီပို့ စ်မှာကတည်းက ကြိုနှုတ်ဆက်ထားတာ... ရင်ထဲမှာအတော်မကောင်းဘူး... ခဏခဏလာလည်ပါဟာ... ဂျူးသူငယ်ချင်းလေးတွေလို ရေးမထွက်တာ ငိုချင်လို့ ပါ... နင်ကတော့ လေဆိပ်ရောက်လို့ကိုကိုခြိမ့်ကြီးမျက်နှာတွေ့ လိုက်တာနဲ့မေ့တတ်သွားမှာပါ... သာယာလှပသောလမ်းချိုးလေးတခုပေါ့... အသက်ရှူကျပ်တဲ့ ကျွန်းပိစိက လွတ်မြောက်သွားတာ တမျိုးပျော်စရာပါ သူငယ်ချင်းရေ... လွမ်းတိုင်း ပို့ စ် တပုဒ်ရေးနော်...
ငွေစန္ဒာ April 17, 2011 at 7:11 AM
ရွှေရတုမှတ်တမ်း April 17, 2011 at 1:29 PM
သွားလမ်းသာလို့ လာလမ်းဖြောင့်ပါစေ ငါ့နှမရေ..
အကိုကြီး နဲနဲ ခရီးပန်းနေလို့ စာရှည်ရှည်မရေးနိုင်သေးဘူးဟေ့
Shinlay April 17, 2011 at 5:34 PM
T T Sweet April 18, 2011 at 8:05 AM
မဆွိတီတို့ သားအမိတော့ မနေ့က မနက်ကပဲ ဆစ်ဒ်နီကို ရောက်ပါတယ်။ အားလုံးအစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါကြောင်း၊ ဆစ်ဒ်နီမှ ဘ၀အသစ်အကြောင်းအရာလေးများလဲ ထူးထူးခြားခြားရေးစရာများရှိရင် ရှယ်ပေးပါဦးမယ်။
မဆွိတီက သူငယ်ချင်းတွေကို နောက်လိုက်တာပါ။ ခုတစ်ခေါက်ထပ်နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်းများအားလုံး၊ နဲ့ ဆုတောင်းပေးကြသူများ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကိုကြီးကျောက် ခရီးပမ်းတဲ့ကြားကတောင် လာနှုတ်ဆက်တာ။ အထူးဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်။ ကိုကြီးကျောက်ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာလန်းဖြာ၊ ဖလန်းဖလန်းထကာ အလန်းကလေးများနဲ့ ဖူးစာဆုံပါစေဗျာ။း))
စုချစ် April 20, 2011 at 10:39 AM
အားတဲ့အချိန် ဂျီတော့မှာ တက်ချောင်းနေတာ မတွေ့လို့... အဆင်ပြေလား...လွမ်းနေပြီလား... သတိရနေလား မေးမလို့...
ဟွန်း... ဒီက စာသာ အချိန်မရလို့ မရေးနိုင်တာ...သူတို့ နန်းကခွာတဲ့နေ့က နောက်တစ်နေ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လှူဖို့ ချက်ပြုတ်နေတာ တန်းလန်းကြီး ပြစ်ထားခဲ့ပြီး ရေတောင် မချိုးအားဘူး... ကြက်သွန်နံ့ ဆီနံ့တွေ တလှိုင်လှိုင် နံနံစော်စော်နဲ့ လေဆိပ် အပြေးအလွှား လိုက်ပို့တာကျတော့ ရေးဘူး... အနံ့တွေ တသက်စာ အမှတ်တရပေးလိုက်တာ... ခုထိ သတိရနေသေးတယ် မလား... ဟိ...
T T Sweet April 20, 2011 at 10:20 PM
ဟားဟား ... အမှတ်ရပါတယ် ... အမှတ်ရပါတယ် ... မအားတဲ့ကြားက လိုက်ပို့တဲ့ ချစ်သယ်ရင်းကြီးကိုရော အားလုံးကို ... ဒီမှာ ပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ မရောက်သေးလို့ ၀ါယာလက်စ်မရှိတော့ အွန်လိုင်းက ကြိုးတစ်ချောင်းထဲ ၃ယောက်လုသုံးနေရလို့ အွန်လိုင်းမှာ သိပ်မတွှေတာဖြစ်မယ်။ ဂျူဂျူးကိုပဲ ဦးစားပေးနေရတယ်။